जीरा पानीको प्रयोग र यसका केहि आश्चर्यजनक फाइदाहरु - ज्ञानविज्ञान
जीरा पानीको प्रयोग र यसका केहि आश्चर्यजनक फाइदाहरु
जीरा (cumin) तौल घटाउनको लागि चमत्कारिक तौल घटाउने पेय पदार्थको रुपमा लिइन्छ । विहान खाली पेटमा जीरा पानी पिउँदा मेटाबोलिज्ममा हुने सुस्तता, पाचन प्रक्रियामा भएको गडबडी, इन्सुलिनमा हुने प्रतिरोधको रक्षा जस्ता समस्याको समाधान हुने विज्ञहरु बताउँछन् । यदि तपाई यस्ता समस्या, पेट बढ्ने जस्ता समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने २० दिनसम्म जीरा पानी नियमित खानुपर्छ ।
के हो जीरा पानी ?
रातभरी भिजाएको जीराको दाना विहान राम्रोसँग भिजाइसकेपछि र राम्रासँग फुल्लिएपछि जीराको दानामा भएको पौष्टिक तत्व बाहिर निस्किन्छ र पानीमा घुल्छ । जसले गर्दा पानीको रंग पहेँलो रङमा बदलिन्छ । जीरा पानी बनाउनको लागि जीरा सीसाको गिलास, स्टेनलेस स्टील वा तामाको कचौराको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
हेर्नुहोस् यसका यी ८ अद्भुत उपाय
१. क्यालोरी घटाउन
एक चियाचम्चा जीरामा क्यालोरीको मात्रा ७ प्रतिशत हुन्छ । यदि तपाईले एक गिलास जीरा पानी पिउनुभयो भने अन्य क्यालोरीयुक्त खाना खान आवश्यक हुँदैन । यद्यपि उक्त क्यालोरी घटाउनको लागि अतिरिक्त काम गर्न आवश्यक भने हुँदैन ।
२. अनावश्यक रेडिकललाई हटाउँछ
अध्ययनका अनुसार , जीराको दाना एन्टिअक्सोडन्टस् हो जसले अक्सिजनमा हुने खतरनाक अनावश्यक रेडिकललाई कम गर्न मद्दत गर्छ । जीराका दाना भिटामिन ‘ए’ र ‘सी’को राम्रो स्रोत हो र यी दुई भिटामिन एन्टीअक्सीडेन्ट पनि हुन् । जसमा मिनरल, तामा र म्याग्नेजजस्ता तत्वहरु पाइन्छन् जसले फ्रि रेडिकललको सफाई गर्ने काम गर्दछ ।
३. अत्याधिक मोटोपनको रोकथाम
जीरामा मोटोपन प्रतिरोधी तत्वहरु हुन्छन् । जसले शरीरमा अनावश्यक मोटोपना आउँन दिदैँन । जीराका दानामा भएको तेलले कोशिका र साइनअलिङ्गको बीचा रहेको क्रसटकलाई अवरुद्ध गरेर सुन्निनबाट बचाउने वैज्ञानिकले बताएका छन् ।
४. मेटाबोलिज्मको मात्रा बढाउँछ
यदि तपाईंको शरीरमा मेटाबोलिज्मको मात्रा कम छ भने विना मोटोपननै शरीरमा मेटाबोलिज्मको मात्रा बढाउँन सकिन्छ । जीरा पानीमा भिटामिन र मिनरल पाइन्छ जसले विविध तरिकाले मेटाबोलिज्मले गर्ने काम गर्छ । साथै जीरा पानीले कोशिकालाई सक्रिय बनाउन र फुल्लिन मद्दत गर्छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले पत्ता लगाएअनुसार जीरा पानीले मेटाबोलिज्मको मात्रा बढाउन, अत्याधिक मोटोपनमा हुने बीएमआइ घटाउन मद्दत गर्छ ।
५. पाचन प्रणालीमा सुधार
जीरा पानीले पाचन प्रणाली र पेटमा भएको बावलको सञ्चालनको लागि निकै महत्वपुर्ण भूमिका खेल्छ । पाचन प्रक्रिया स्वस्थ हुनु नै मेटाबोलिज्मको मात्रा बढ्नु हो साथसाथै तौल घट्नु पनि हो । जीरा पानीले निरन्तर पाचन प्रक्रियामा एन्जामाइनलाई प्रभाव पार्ने र ब्लोटिङ घटाउने काम गर्छ ।
६. कोलेस्ट्रोल घटाउँछ
एलडिल अर्थात खराब कोलेस्ट्रोलले तपाईको धमनीको प्वालमा प्लेक बनाएर कार्डियोभास्कुलरमा संक्रमण पैदा गराउन सक्छ । इरानका वैज्ञानिकहरुले मोटोपन भएका महिलामा जीराको प्रभावबारे गरेको अनुसन्धान गरे र शरीर संरचना, लिपिड प्रोफाइलको प्रभावको पनि अध्ययन गरे । ३ महिनापछि लिपिड प्रोफाइलको विश्लेषण गर्दा एलडियल कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसराइड्स र उच्च एचडिएल कोलेस्ट्रोल कम पाइयो । जीरा पानीले कम्मरको साइज कम गर्न मद्दत गर्छ ।
७. इन्सुलिनमा संवेदनशीलता बढाउँछ
रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्दै गयो भने शरीरले इन्सुलिनको मात्रा नियन्त्रण गर्न सक्दैन र मधुमेह, पीसीओ र बाँझोपनको समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्न आवश्यक हुन्छ । अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले जीराको तेलले रगतमा इन्सुलिनको मात्रा नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका छन् ।
८. निकोटिन फाल्न मद्दत गर्छ
अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण शरीरमा बढिरहेको निकोटिनले शरीर सुन्निने, तनाव बढाउने, कब्जियत गराउने र तौल पनि बढाउँछ । जीरा पानीलको प्रयोगले यस्ता समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
बहुगुणी जीरा र सक्खर पानीमा मिसाएर खाँदा कुन कुन रोगबाट बच्न सकिन्छ ? जान्नुहोस
जीरा हरेक घरमा मसलाका रूपमा प्रयोग हुन्छ । यसले खानाको स्वाद र सुगन्ध बढाइदिन्छ । अनि सक्खरको मिठासले मिठाईहरूको स्वाद बढाइदिन्छ । यी बहुगुणी जीरा र सक्खर पानीमा मिसाएर खाँदा अनेकौं रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
सक्खर र जीरा भएको पानी पिउँदा ढाड वा कम्मरको दुखेको समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ ।
जीरा र सक्खर प्राकृतिक गुणहरूले भरिएका हुन्छन् । यिनीहरूले शरीरभित्रको फोहोर सफा गरेर रोगप्रतिरोधक क्षमतालाई बलियो बनाउँछन् ।
रजस्वला अनियमित भएमा र पेटमा पीडा जस्ता समस्या आएमा यस्तो पानी पिउँदा आराम पुग्छ ।
कब्जियत, ग्यास, पेट फुल्ने र पेट दुख्ने लगायतका समस्या छ भने सक्खर र जीरा भएको पानी पिउँदा फाइदा हुन्छ ।
टाउको दुख्ने समस्या छ भने सक्खर र जीरायुक्त पानी पिउँदा लाभ मिल्छ । ज्वरो आएको अवस्थामा पनि यो मिश्रणले त्यसबाट छुटकारा दिलाउँछ ।
सक्खर र जीरा हालेको पानी पिउँदा शरीरमा रक्ताल्पताको समस्या हट्छ । यसले रगतमा भएका अशुद्धिहरूलाई पनि हटाउँछ ।
यसरी बनाउनुस् मिश्रण
सबभन्दा पहिला एउटा भाँडोमा दुई कप पानी हाल्नुस् । यसमा एक चम्चा फुटाएको सक्खर र एक चम्चा जीरा मिसाएर मज्जाले उमाल्नुस् । त्यसपछि त्यसलाई एउटा कपमा हालेर त्यो पानी पिउनुस् । यो पानी एक कप दिनदिनै बिहान खाली पेटमा पिउँदा छिट्टो फाइदा पुग्छ ।
हामीले केहि थप जानकारी दिइएका छाै
टाउको दुखेमा यस्ता समाधानका उपाय लगाउन सकिन्छ एकपटक पढाैँ
टाउको दुख्ने समस्याले सबै मानिसलाई सताइ रहेको हुन्छ । कहिले कहिँ धेरै गर्मि हुदा पनि टाउको दुख्ने गर्छ भने कहिले धेरै तनावका करण पनि टाउको दुख्छ । टाउको दुखेमा यस्ता समाधानका उपाय लगाउन सकिन्छ ।
१. चम्किलो प्रकाश र भीडभाडबाट टाढै रहने गर्नुपर्छ । अति दुर्गन्ध तथा बास्ना आउने ठाउँ नजिक जाँदा पनि टाउको दुख्ने गर्छ । यस्तो कुराबाट टाढा रहनुपर्छ ।
२. भोको पेट नबस्ने, पानी तथा फलफूल प्रशस्त मात्रामा खाने गर्नुपर्छ । चिन्तामुक्त भएर बस्ने कोशिश गर्ने गर्नुपर्छ । कम्तिमा पनि ६ देखि आठ घन्टा आरामले सुत्ने ।
३. गुन्द्रुक, सिन्की, तामा तथा बोतलको पुरानो अचार खानु हुँदैन । यसले टाउको दुखाइलाई बढी निम्त्याउंछ ।
४. दही, मही, पनिर, आइसक्रिम, कफी चकलेट धेरै खाँदा पनि त्यतिकै टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ । यस्तो बानीलाई हटाउनुपर्छ ।
५. कोक, बियर, रक्सी, वाइन (बन्द बोतल पेय पदार्थ )को सेवन बढी गर्नु हुँदैन । त्यसैले यस्तो बानीलाई पनि सुधार्नुपर्छ ।
किन दुख्छ टाउको ?
केही व्यक्तिमा उपवासपछि पनि टाउको दुख्ने गर्छ । खासगरी बेलुकी ६ बजेदेखि अर्को दिन बिहान १० बजेसम्म भोकै बस्दा यसरी टाउको दुख्ने गर्छ ।
यस्तो टाउको दुखाइमा पनि कफी सेवनबाट सुधार हुन सक्छ। रगतलगायत परीक्षणमा भोको पेट बस्नुको साटो कस्ता तरल पदार्थ खान हुन्छ (जस्तै चिया, कफी, पानी आदि) जानकारी लिने । यस्तो टाउको दुखाइबाट जोगिन राति भोकै नसुत्नु बेस हुन्छ ।
अल्कोहल (मध्यपान) का कारण हुने ‘ह्याङओभर’को पहिलो लक्षण नै टाउको दुख्नु हो । तर, एक पेगदेखि कतिसम्म अल्कोहल पिए ह्याङओभर हुन्छ भन्ने व्यक्तिअनुसार फरक पर्छ ।
अल्कोहल पिएपछि फुट्नेगरी टाउको दुख्नु, छिटोछिटो पिसाब लाग्नु र वान्ता गर्नुले ‘डिहाइड्रेसन’को जोखिम बढाउँछ । यसले रगतमा समेत परिवर्तन गर्छ र मस्तिष्कमा अक्सिजनको प्रवाह कम हुन्छ ।
कलेजोले रगत–मस्तिष्कको क्षमताले धान्नेभन्दा धेरै भएर अल्कोहल पचाउनु (मेटाबोलिज्म) परेपछि ह्याङओभर हुनेगर्छ ।अल्कोहलले तनावका कारण हुने टाउको दुखाइ, अधाहा (आधा टाउको दुख्ने) र माइग्रेन समेत निम्त्याउन सक्छ ।
अल्कोहलका मामिलामा बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव भनेकै, आफूले पचाउन सक्नेगरी पिउने, खाली पेटमा अल्कोहल सेवन नगर्ने र पानीको मात्रा बढाउने नै हुन् । र, तपाईं अल्कोहलप्रति धेरै संवदेनशील हुनुहुन्छ भने सेवन नगर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।
३. फोलेटयुक्त भोजनको मात्रा
हालै गरिएको एउटा अध्ययनले फोलेटयुक्त भोजनको कमीका कारण बारम्बार माइग्रेन दुख्ने गरेको तथ्य पत्ता लगाएको थियो ।
त्यसैले हरिया सागपात, गेडागुडी, बिउ, कुखुराको मासु, अन्डा, सुन्तला, कागती, अंगुर, भोगटेजस्ता फलफूल पर्याप्त मात्रामा खाने गर्नुपर्छ ।
अलिकति बढी पानी खाँदैमा केही बिगार पनि हुँदैन, त्यसैले केही दिन प्रयोगकै रुपमा १–२ लिटर पानी बढी खाएर हेर्नुस् । पानीको बोतल जहाँ जाँदा पनि सधैं बोक्नुहोस् र खाली हुनासाथ नबिर्सी भरिरहनुहोस्, ताकि बढी पानी खानुपर्छ भनेर बोतलले नै तपाईंलाई सम्झना दिलाइरहोस् ।
दैनिक चार सय मिलिग्रामभन्दा बढी क्याफिन सेवन गर्ने ५० हजार जनाभन्दा बढी नर्बेजियालीमा टाउको दुखाइ र क्याफिनको सम्बन्धबीच एउटा अनुसन्धान गरिएको थियो । सहभागीमध्ये सबैभन्दा बढी क्याफिन (दैनिक ५४० मिलिग्राम) सेवन गर्नेहरूलाई माइग्रेन लगायत टाउको दुखाइको सम्भावना १० प्रतिशत बढी पाइयो ।
तर जब टाउको दुखाइको दोहोरिने प्रवृत्तिको अध्ययन गरियो, थोरै मात्रामा क्याफिन (दैनिक २४० मिलिग्राम) सेवन गर्नेको तुलनामा बढी मात्रामा क्याफिन सेवन गर्नेलाई ‘नन–माइग्रेन’ टाउको दुखाइ महिनामा ७ पल्टभन्दा कम मात्र हुने गरेको पाइयो । यसमा क्याफिनको बढी मात्राले टाउको दुखाइ घटाउने तथ्य पाइयो ।
अनुसन्धानकर्ताले सबैभन्दा थोरै क्याफिन (दैनिक १२५ मिलिग्राम) सेवन गर्नेहरूलाई भने महिनामा १४ पल्टभन्दा बढी टाउको दुख्न सक्ने तथ्य पत्ता लगाए। ती सहभागीहरू बढी संवेदनशील र क्याफिनप्रति उदासिन भएका कारण यस्तो हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताले बताए ।
यस्ता छन्, घरैमा उपलब्ध सामग्रीहरू जसले टाउको दुख्ने निको हुन्छ
ल्वांगमा दुखाइ कम गर्ने तत्व पाइन्छ । केहीबेर सम्म यसरी ल्वांगको स्वाद सुँघिरहँदा टाउको दुखाइ कम हुन्छ ।
टाउको दुखेको बेला चिनी नहालेको एक कप चिया पिएर आराम गर्दा टाउको दुखाई कम हुन्छ ।
नरिवलको तेलले १० मिनेटसम्म मसाज गर्दा मांसपेशीलाई आराम हुन्छ र टाउको दुख्न छोड्छ ।
सातवटा लसुनका पोटीलाई आधा गिलास पानीमा उमालेर पिउँदा तनाव हट्छ अनि टाउकोदुखाइ नियन्त्रणमा रहन्छ ।
बदामको तेलले टाउकोमा १५ मिनेटसम्म मसाज गर्दा मूड फ्रेश हुन्छ र टाउको दुख्दैन ।
एक कप पानीमा अदुवाको सानो टुक्रा हालेर उमाल्नुस् अनि मनतातो भएपछि चिया पिएजसरी पिउनुस् । ठीक हुनुहुनेछ ।
एक गिलास पानीमा एक चम्चा जीरा मिसाएर पिउनुस् । यसो गर्दा रक्तसञ्चार राम्रो हुन्छ र टाउको दुख्न छोड्छ ।
आईस प्याकले टाउको सेक्नुभयो भने शिरका मांसपेशीहरूलाई आराम पुग्छ र टाउको दुख्न छोड्छ ।
एक गिलास मनतातो पानीमा कागती निचोरेर पिउनुभयो भने तनाव भाग्छ र टाउको दुखाइ पनि नियन्त्रणमा रहन्छ ।
एक चम्चा दालचिनीको धूलोमा अलिकति पानी हालेर पेस्ट बनाउनुस् । अनि त्यसको लेप टाउकोमा लगाउनुस् । त्यसलाई २० मिनेटपछि धुनुस् । टाउकोदुखाइ भाग्छ ।
अलिकति चन्दनको धूलोलाई पानीमा भिजाएर पेस्ट बनाउने अनि आधी घन्टापछि धुने गर्दा पनि टाउको दुख्न बन्द हुन्छ ।
मानसिक तनाबबाट मुक्त हुन अपनाउनुहोस् यस्ता उपायहरु
सजिलैगरी भन्न सक्छन्– मलाई टेन्सन छ । तर त्यो तनाबको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संसारमा गम्भीर खालका रोगीको संख्या थपिदै गएको छ। चिकित्सकहरु पेटमा हुने अल्सरदेखि, धेरै गम्भीर रोगको कारण बन्ने उच्चरक्तचाप, चिनीरोगदेखि मतिष्कघात र पक्षघातको प्रमुख कारण तनाव बन्दै गएको बताउँछन् ।
मानसिक तनाव भए के हुन्छ ?
मानसिक तनावका कारण मानिसलाई थुप्रै रोगहरू लाग्न सक्छ । डिप्रेसन, निराशापन, एन्जाइटिक डिसअर्डर, छटपटीको समस्या, त्यस्तै गरेर अनिन्द्राको समस्या हुन्छ । तनावमा मानिसहरूलेले रक्सी, गाजा, बिभिन्न खालका ट्याब्लेटसमेत प्रयोग गर्छन् । धेरै तनाव भयो भने कहिलेकाही रक्सी खानेले पनि धेरै खान्छ । जस्तै भूकम्पका कारणले आफ्नो घर भत्कियो ।
अब बनाउने उपाए छैन त्यसले गर्दा कतिपए मानिसलाई तनाव भइरहेको छ । त्यस्तै पागलपनको समस्या पनि तनावकै कारण हुन्छ । टाउको दुख्ने समस्या अर्को समस्या हो । अलिकति तनाव भयो टाउको दुखिहाल्ने समस्या पनि हुन्छ कतिपएलाई ।
टाउको गह्रौ भएजस्तो, भारी भएजस्तो, तातो भएजस्तो महसुस हुन्छ । दिक्क लाग्ने नरमाइलो लाग्ने, निराश हुने छटपटी हुने, अत्यास लाग्ने ढुकढुकी बढ्ने हुन्छ। कतिपए अवस्थामा मान्छेलाई मुटुकै समस्या भयोकि मलाई भन्ने पनि हुन्छ। डर लाग्ने, पेट पोलेको जस्तो हुने हुन्छ । कतिपएलाई ‘स्ट्रेस’ को कारणले ग्याष्ट्रिकको समस्यासमेत हुन्छ ।
ग्याष्ट्रिकको दबाइ खाएको छ, तर पेटको समस्या समाधान भएको छैन । दिसा कहिले ढिलो हुने कहिले चाडो हुने भएको छ । हातखुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, कहिले यता दुखे जस्तो कहिले उता दुखेजस्तो लाग्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा जचाउन गयो रिपोर्टमा केही पनि आउदैन ।
यो सबै तनावका कारणले हुन्छ। शंका लाग्ने, मलाई केही भयोकि भन्ने खालका महसुस हुने हुन्छ । रक्सी चुरोट गाँजा लगायतका कुलतमा फस्ने पनि हुन्छ ।
मानसिक तनावबाट बच्ने उपाय के हो ?
मानसिक तनावबाट बच्न दुई वटा उपाय छन् । एउटा यसबाट कसरी जोगिने र अर्को यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने हो । सबैभन्दा पहिला आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । जसरी शरीर स्वस्थ्य राख्न हामी व्यायाम गर्छो त्यसैगरी मनको स्वस्थताका लागि पनि काम गर्नुपर्‍यो ।
आफ्नो विचारलाई कसरी स्वस्थ्य राख्ने ? विचार कतातिर गइरहेको छ । म आज कस्तो छु? मेरो सोचाई कस्तो छ ? म स्वस्थ्य छुकि छैन ? आज म खुसी छुकि छैन ? अलि बढी तनावमा पो छुकि यस्ता कुरा बेलाबेलमा जाच्नुपर्छ ।
पारिवारिक तनाव होकि, व्यवसायिक तनाव होकी, जागीरको तनाव होकी यसलाई पत्ता लगाउनुपर्छ । कसैले मलाई आलोचना गर्‍यो मैले माफी नदिएको होकी जस्ता कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यो बाहेक निन्द्राको व्यवस्थापन, खानाको व्यवस्थापन गर्न जरूरी छ । बेलाबेलामा मनोरन्जन आवश्यक छ ।
आफूले आफूलाई स्वस्थ्य र बलियो बनाउन मैले कुनै रमाइलो र खुसी हुने काम गरेको छुकि छैन भनेर आफूले आफैलाई जाच्नुपर्छ । आफ्नो सबैभन्दा ठूलो डाक्टर आफै हो । त्यसैले मानिसले आफ्नो तनावको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ ।
आधुनिकताले गर्दा व्यक्तीवादी चिन्तन हावी भएको छ । दिनरात काम गर्ने गर्नाले एक दिन पनि मानिसलाई फुर्सद छैन । राति ‘डिउटी’ गर्नेहरुलाई अझै बढी मानसिक तनावको समस्या हुन्छ ।
बेलाबेलामा साथीभाइ, आफन्तसँग घुम्ने रमाइलो गर्ने गर्नुपर्छ। बिदाको दिनमा आफ्नो कामको तनाव लिनु हुँदैन । आफ्नो विचारलाई बेलाबेलामा जाँच गर्नुपर्छ । यस्ता कुरालाई ध्यान दिने हो भने हामी एन्जाइटी, डिप्रेसनलगायतका समस्याबाट सजिलै बच्न सक्छौ ।
Don't Miss it के तपाइँ मान्छेको अगाडी बोल्न डराउनु हुन्छ ? यस्ता छन् आत्मविश्वास जगाउने ३ सूत्र
Up Next पेटको सम्बन्धी रोगहरुको उपचारका केहि घरेलु उपाय
भोक कतिको लाग्छ ? भोक लागे पछी मात्र खाने कि समय-समयमा खाने ? जान्नुहोस्
हामी आजकाल शरिरको आवश्यकताका लागि भन्दा पनि समयका लागि खाना खाने भएका छौं । हामी यति ब्यस्त भएका छौं की…
स्वादिलो गुणकारी पेय दही सेवन गर्दाका अचुक फाइदाहरू – जानीराखौ
किन खाने फापर ? फापरमा यति धेरै पोषणतत्व पाइन्छ – जानीराखौ
गरिबको खाना भनेर चिनिएको फापर अहिले धनीमनीले औषधिको रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। कुनै जमानामा फापर पनि खान्छन् भनेर हेला…
आलु खाने गर्नु हुन्छ ? खान नजाने विष खाए बराबर होला ! – एकदमै महत्वपूर्ण जानकारी
आलु भान्सामा अनिवार्य रुपमा पाइने परिकार हो । आलु, अन्य सागसव्जी, तरकारीमा मिसाएर मात्र नभइ तरकारी बनाएर उसीनेर तारेर आदी…
सलाद हाम्रो स्वास्थका लागि फइदाजनक छ, तर यसलाई भोजनका साथ खानु भनेको सलाद खाने सही तरिका होइन
सलाद खानुको फाइदा पनि छ भने नोक्सान पनि । सलाद कहिले र कसरी खाने भन्ने कुरा थाहा पाउनु अति नै…
फर्सी कत्तिकाे मन पर्छ ? मन नपरेपनि खाने गर्नुहाेस, फाइदा सुनेर अचम्ममा पर्नुहुनेछ
तरकारीको रुपमा प्रयोग हुने विभिन्न तरकारीहरू मध्ये फर्सी पनि एक निकै उपयोगी तरकारी हो । फर्सी स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि निकै…
हाम्राे भान्सामा नियमित पाक्ने आलुलाई यति गरे स्वास्थ्यमा फाइदै फाइदा, थाहा पाइराख्नुहोस्
आलु मन नपराउने मानिस कमै होलान् । विश्वको जुनसुकै भेगमा पनि पाइने र अरु तरकारीको तुलनामा सस्तो पनि पर्ने भएकाले…
महान् रुमीका जीवन उपयोगी प्रेरक भनाईहरु
सकारात्मक कुराले सबैको जीवनमा उज्यालो पन छर्ने गर्दछ । मानीसको जीवनमा सकारात्मक सोच हुन एकदमै जरुरी हुन्छ । आज हामीले…
कपालमा नियमित तेल लगाउँदाका फाइदा यस्ता छन् जानिराखाैँ
कपाललाई महिलाहरुको गहनाको रुपमा लिइन्छ । महिलाको मात्र नभई कपाल पुरुषहरुको सौन्दर्यको पहिचान पनि हो । धुलो, धुवा, घाम, चिन्ता,…
तपाइकाे सुत्ने तरीका कतै गलत त छैन ? जान्नुहाेस्
आरामको लागि निन्द्रा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । राम्रोसंग सुत्ने, राम्रो निन्द्रा लिने व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक थकानबाट मुक्त हुन्छ ।…
यस्ताे सानाे सानाे बानीले गर्दा तपाइकाे कपाल तथा छाला बिग्रीरहेकाे छ, जान्नुहाेस्
दैनिक जानी–नजानी गरिने गल्तिका कारण सुन्दरतालाई बढाउनुभन्दा पनि घटाइरहेका हुन्छन् । सानो गल्तीले पनि सुन्दरतालाई बिगारिरहेको हुन्छ । छाला र…